ကြက်သားနှင့်ငှက်ပျောအူကာလသားချက် (ထိုင်းလ်စတိုင်) ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
ဗမာကြက်(ခ) အိမ်ကြက်......................၁ ကောင်(၄၀ကျပ်သားခန်.)
ငှက်ပျောအူ......................................၁ ခု( ၂ တောင်ခန်.ရှိသော)
စပါးလင်...........................................၂ ချောင်း(အဖြူ ပိုင်းသာ)
ဆား(ငါးငံပြာရည်) ၊ ကြက်သားမှုန်. (ဟင်းခတ်မှုန်.)
ကြက်သားတစ်ကောင်လုံး( ခေါင်း ၊ခြေထောက် ၊ အတွင်းကလီစာပါ) ကို
အနေတော်အတုံးများတုံးပြီး၊ ဆား ၊ ဟင်းခတ်မှုန်.၊ ထောင်းထားသောချင်း ၊ နနွင်းမှုန်.တို.နဲ.နယ်ပြီးနှပ်ထားပါ။
ခွါထုတ်ပစ်ပါ။အဖြူ ရောင်အူတိုင်လေးကို လက် ၂ဆစ်ခန်.လှီးဖြတ်ပြီးသံပုရာရည်(သို.) ဗီနီဂါရည်ပါသောရေမှာစိမ်ထားပါ။
ရေစိမ်ထားသောငရုတ်သီး၊ စပါးလင် ၊ ကြက်သွန်နီ ၊ ကြက်သွန်ဖြူ တွေကိုညှက်နေအောင်ထောင်းပါ။
၀ိုက်ထည့်ကာအဖုံးပ်ိတ်ပြီး..ကြက်သား ၃ပုံ ၂ပုံ နှူးသည်အထိချက်ပါ။
ထိုအချိန်ရောက်မှ..သံပုရာရည်စိမ်ထားတဲ့ ငှက်ပျော အူနုဖတ်တွေ ပေါင်းထည့်
ဆားး(ငါးငံပြာရည် ) ၊ ကြက်သားမှု န်.( ဟင်းခတ်မှုန်.) တို.နဲ.အရသာသွင်းပါ။